IPacketZoom's Mobile Expresslane CDN Isebenzisana neAmazon Cloudfront | Martech Zone
NgoLwesibini, Februwari 6, 2018 NgoLwesithathu, ngoFebruwari 7, 2018 Douglas Karr
IPakethe yeZoom, inkampani ephucula ukusebenza kwesicelo se-intanethi ngokusebenzisa i-in-app yesoftware yenethiwekhi, yazisa ubudlelwane kunye IAmazon CloudF Mbili ukubandakanya iCloudFront kwiPacketZoom's Mobile Expresslane service. Isisombululo esihlanganisiweyo sinika abaphuhlisi bohlelo lokusebenza lweselfowuni iqonga lokuqala kunye nokuphela kweselfowuni kuzo zonke iimfuno zomsebenzi wenethiwekhi.
Yeyonaqonga lokuqala lokuhamba-in-one elijongana nazo zonke iimfuno zomsebenzi wosetyenziso lweselfowuni- imilinganiselo, ukusebenza kweemayile zokugqibela, kunye nokusebenza kweemayile eziphakathi. Iimbalasane zenkonzo zibandakanya:
IPacketZoom's Mobile Expresslane ukukhawulezisa ii -apps ezihambayo ngokufikelela kwi-3x kwaye ihlangula ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-90 zonxibelelwano yabapapashi beapps kubandakanya iGlu, Sephora, Photofy, Upwork kunye nabanye.
Ngokusebenzisana ne-CDN yeWebhu ye-CloudFront, iPacketZoom kunye neAmazon baba ngabokuqala ukubonelela ngesisombululo sokunxibelelana esiphathwayo.
Kunye nePacketZoom yokukhawulezisa imayile yokugqibela, abathengi bafumana isisombululo esifanelekileyo sokuhambisa usetyenziso.
Abathengi bePacketZoom abasele besebenzisa iAmazon CloudFront kumazwe ahlukeneyo kubandakanya iGlu Mobile, Upwork, Photofy (US), Perfect Corp (Asia), kunye neBelorp (Latin America).
IPacketZoom yinkokheli kwindawo yokunyusa usetyenziso lweselfowuni kunye netekhnoloji yeFowuni Expresslane, ekhawulezisa ii -apps ezifikelela kwiselfowuni ukuya kuthi ga kwi-3x kwaye ihlangule ukuya kuthi ga kwi-90% yokuqhawulwa kwenethiwekhi kubapapashi besoftware kubandakanya iGlu, Sephora, Photofy, Upwork kunye nabanye. IPakethe yeZoom iphucula amava omsebenzisi kwiiapps zesoftware ngokususa ukusebenza kwendlela kwimayile yokugqibela. Iqonga layo elihambahambayo libonelela ngemveliso epheleleyo, yokuphela kokugqibela yoLawulo lweNtsebenzo yoSetyenziso kunye nokuSebenza (APMO).
Isisombululo se-CDN yeWebhu ye-CloudFront yeAmazon inesabelo esikhulu semarike phakathi kwabapapashi bezicelo eziphathwayo. Ikhusela ngokukhuselekileyo umxholo ngokuphucula ukuhanjiswa kwimayile ephakathi. Kunye nePacketZoom's yokukhawulezisa imayile yokugqibela, abathengi bafumana isisombululo esifanelekileyo sokuhambisa usetyenziso.
Siyavuya ukunikezela ngeyona nto iphambili kuwo omabini la mazwe: I-Amazon CloudFront - eyona CDN yeWebhu idumileyo phakathi kwabaphuhlisi beselfowuni- kunye nePacketZoom Mobile Expresslane- isisombululo esisisiseko sokukhawulezisa usetyenziso. Ibiyindalo yemveliso yendalo kuthi, kuba uninzi lwabathengi bethu sele belisebenzisa i-CloudFront. UShlomi Gian, umphathi wePacketZoom
IPacketZoom ichaza ukusebenza kwefowuni kusetyenziswa itekhnoloji yokunxibelelana ngaphakathi nohlelo. Eyilelwe ngokukodwa ii -apps zemveli zesoftware, iqonga lePacketZoom leplanethi lixhobisa abaphuhlisi bohlelo lokusebenza lweselfowuni ukuba bandise ukusebenza kweapps ngexesha elifanelekileyo. I-PacketZoom iphucula amava omsebenzisi kwii -apps zeselfowuni ngokususa ukusebenza kweendlela kwi-mobile yokugqibela, ukukhawulezisa isantya sokukhuphela ukuya kuthi ga kwi-3x, ukuhlangula ukuya kuthi ga kwi-90% yeeseshoni ukusuka kwi-TCP yokuhla konxibelelwano kunye nokunciphisa iindleko ze-CDN. Ngolwazi oluthe kratya ndwendwela IPakethe yeZoom
tags: amazon ngaphambilibelcorpCdnilifu elingaphambiliglu mobilezityabyigqibeleleifotoUmsebenzi